I-China TS-DQ-100 Double Arm Electrical Medical Endoscopic Pendant evela kubavelisi beFektri kunye nabathengisi | Wanyu
1. Igumbi lokusebenza
2. Igumbi likaxakeka
4. Igumbi lokuchacha
1. Inkqubo yokuqhutywa kombane
Ngenkqubo eqhutywa ngumbane kunye nengalo echaziweyo, iya kuba ilungele izinto zonyango, ukugcina ixesha kunye nomzamo womzimba.
Isongezo soNyango soMbane
2. Igumbi elijikeleza kabini
Iingalo ezijikelezayo ezibini, ubude bengalo bungenziwa ngokwezifiso kwaye banokujikeleza iidigri ezingama-350, zibonelele ngendawo eninzi yokuhamba.
3. Uyilo lokwahlula iGesi noMbane
Ngokwemigangatho engqongqo yamazwe aphesheya, indawo yegesi kunye nendawo yombane yenzelwe ngokwahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba imigca yokuhambisa igesi kunye nemibhobho yokuhambisa igesi ayizukuphazamiseka ngengozi okanye ilahlwe ngenxa yokujikeleza kwesandi.
4. Itreyi yezixhobo
Isixhobo setreyi senziwe ngamanqwanqwa aphezulu e-aluminium ene-alloy enamandla. Kukho iileyili zentsimbi ezingenasici kumacala omabini ekufakela ezinye izixhobo. Ukuphakama kwetreyi kunokutshintshwa njengoko kufuneka. Itreyi ineekona ezijikelezileyo zokhuselo.
Isilinganisi soNyango soNyango
5. Iindawo zegesi
Umbala kunye nokumila kokujongana negesi kwahlukile ukuthintela unxibelelwano olungalunganga. Ukutywinwa kwesekondari, amazwe amathathu (evulekile, evaliweyo kwaye engafakwanga), isetyenziswe ngaphezulu kwamaxesha angama-20,000.
Ukujikeleza kwengalo: 0-350 °
Ujikeleziso lwependenti: 0-350 °
Ingalo ephindwe kabini yoNyango lwezoNyango lwezoNyango zoMbane
Indawo yegesi yeVAC
Ipetroli yeCarbon Dioxide Gas Outlet
RJ45 Zamacebo Okufaka Umbane
Egqithileyo QF-JX-300 China ICU Medical Separate Bridge Pendant for Hospital
Okulandelayo: I-TS-D-100 ephindwe kabini yombane oGunyazisiweyo ngeGesi yokuSebenza
TD-Q-100 Ingalo enye Electric Endoscopi zoNyango ...
I-TS-D-100 isiBini seNdawo yokuThengiswa kweGesi yoNyango ...
TD-D-100 Single Electric zobuGcisa eziphephezelayo pendant w ...